ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်း | Rev.U Min Lwin
မတောက်တစ်ခေါက် သိတာလေးတွေ ရေးချင်လို့ ရေးနေတာပါ။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 27/05/2013
Posted in: ဆောင်းပါး.	Tagged: ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်.	2 Comments
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာစရာ၊ သိမှတ်စရာ မြောက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ သင့် အနေ ဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် အကြောင်းကို မည်မျှလောက် စဉ်းစားခဲ့ပါ သနည်း။ ကောင်း ကင် နိင်ငံတော် အကြောင်း မည်မျှလောက် သင်သိရှိပြီးပါပြီလဲ။ ကျွန်တော်တို့သည် ထာဝရ နာ ကျင်ခြင်းနှင့် ဝမ်းနည်းခြင်း တို့ ကင်မဲ့ရာနေရာ၊ အပြစ်တရားနှင့် သေခြင်းတရား ကင်းမဲ့ရာ နေရာ၊ ပျော် ရွင်ခြင်းနှင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ ပြည့်စုံရာနေရာ အကြောင်းကို သင်မည်မျှ လောက် သိရှိပြီး ပါပြီလဲ။
ကျွန်တော်သည် အမှုတော်ဆောင် တစ်ဦးအနေဖြင့် မကြာခဏ ခရီးထွက် ရပါသည်။ ထိုသို့ ခရီးမထွက် ခင်ကပင် အချိန်အနည်းငယ် ယူပြီး ထိုဒေသ အကြောင်း၊ ရာသီဥတု၊ စီးပွားရေး အခြေအနေ၊ လူတို့၏ စရိုက် သဘော၊ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကို ကြိုတင်လေ့လာကာ ခရီစဉ်အတွက် ပြင်ဆင်လေ့ ရှိပါသည်။ယခု ကျွန်တော်တို့ သွားရမည့် နေရာသည် ခဏတာ အလည်အပတ်အပတ် ခရီးမဟုတ်။ ထာဝရ ကာလနေ ထိုင်ရမည့် နေရာ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုမို လေ့လာ သင့်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကျွန်တော် တို့၏ နာမည်များသည် ထိုနေရာတွင် ရှိနေပြီး ဖြစ်သည်ဟု ရေးသားထားပါသည်။ ထိုနေရာ သည် ကျွန်တော်တို့၏ အမွေခံရာ တိုင်ပြည်နှင့် နိုင်ငံသားများပင် ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုနေရာသည် ကျွန်တော်တို့ သိရှိထားသည့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။ ကျွန်တော်အနေဖြင့် ထိုနေရာအကြောင်းကို လေ့လာနိုင် သလောက် များစွာ လေ့လာလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော် ထာဝရ ကာလနေထိုင်ရမည့် နေရာဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ထိုနေရာကို လေ့လာနိုင်ရန် ထိုနေရာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသူကိုယ်တိုင် ပြောပြသော အကြောင်းအရာများကို ပိုမို ဦစားပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေရာကို မည်သူ ရောက်ရှိ မြင်တွေ့ခဲ့ပါသနည်း။ သခင်ခရစ်တော်၏ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို ရေးသားသော စာရေးဆရာက ပြောခဲ့သည်မှာ
“သန့်ရှင်းသော မြို့တည်း ဟူသော ယေရုရှ လင် မြို့သစ်သည် မိမိခင်ပွန်းဘို့ တန်ဆာဆင်သော မင်္ဂလာဆောင် သတို့သမီး ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်လျက် ဘုရားသခင် အထံတော်၊ ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်သက် သည်ကို ငါမြင်၏” (ဗျာဒိတ် ၂၁း၂)
ဟု ပြောဆို ရေး သားခဲ့ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ထိုသူသည် ပထမဦးဆုံး မျက်စိနှင့် ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ပြီး စာအဖြစ် ရေးသား မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်ကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင် ခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ကောင်း ကင်နိုင်ငံတော် အကြောင်းကို သိရှိနိုင်ရန် ထိုသူရေးသား ထားသော ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှ အကြောင်း အရာများဖြင့် ကောင်းစွာ လေ့လာသိရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို လေ့လာမည်ဆိုရာတွင် ပထမဦးစွာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် သည် အမှန်တကယ် ရှိနေကြောင်း လက္ခံ ယုံကြည်ဘို့ လိုအပ်ပါသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် သည် နေရာဒေသ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ နေထိုင်ရန် နေရာတစ်ခု လည်း ဖြစ်သည်။
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ဆိုတာ အမှန် တကယ် ရှိပါတယ်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် တမန်တော် ရှင်ယောဟန်က ပြောခဲ့သည်မှာ
“ကောင်း ကင် သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်ကို ငါမြင်ရ၏”
“သန့်ရှင်းသော မြို့တည်း ဟူသော ယေရုရှ လင်မြို့သစ်သည် . . . . . . . ဘုရား သခင် အထံတော်၊ ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းသက် သည်ကို ငါမြင်၏။ (ဗျာဒိတ် ၂၁း၁)
အထက်ပါ သတင်းစကားသည် ပုံပြင်၊ ဇတ်နိပါတ်၊ ဘာသာရေး ဆန်သော ပြောဆိုမှုတစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်နေသော ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး အတွက် တီထွင်ပြောဆိုထားချက် တစ်ခုလည်း မဟုတ်ပါ။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၊ (ကောင်းကင်ရွေပြည်) ဆိုသည်မှာ အမှန်တကယ် ရှိနေပါသည်။
ယနေ့ အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများမှာ သစ်သား၊ ကျောက်၊ အုပ်၊ ဘိလပ်မြေ၊ သဲ၊ ထုံး၊ ကျောက်စရစ်၊ သံ အစရှိ သဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် ထိုပစ္စည်များကို အသုံးပြုပြီး အဆောက်အဦများကို ဆောက်လုပ်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။
သခင်ယေရှုက လောကတွင် အမှုတော်မြတ်တွင် မပါဝင်ခင်က အသက်သုံးဆယ် အရွယ်အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အရာမှာ လက်သမားဖြစ်သောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးအပိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယော ၁၄း၂ တွင် “သင်တို့ နေစရာ အရပ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှါ ငါသွားရ၏။” ဟု ဆိုထားသောကြောင့် ကောင်းကင်အရပ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေး ပညာရှင်ကြီးမှာ သခင်ခရစ်တော်သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းများ၏ စာရင်းကို ရှင်ယောဟန်က ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ဤသို့ ဖော်ပြထားပါသည်။
“မြို့ရိုးကိုယ်သည် နဂါးသွဲ့ကျောက်ဖြစ်၏။ မြို့သည်လည်း ကြည်လင်သောဖန်နှင့် တူသောရွှေစင်ဖြစ်၏။ မြို့ရိုးအမြစ်တို့သည် ကျောက်မြတ်အမျိုးမျိုးနှင့် ပြည့်စုံကြ၏။ ပထမအမြစ်ကား နဂါးသွဲ့ ဖြစ်၏။ ဒုတိယအမြစ်ကား နီလာ၊ တတိယအမြစ်ကား မဟူရာ၊ စတုတ္ထအမြစ်ကားမြ၊ ပဉ္စမအမြစ်ကားကြောင်၊ ဆဌမအမြစ်ကား ကျောက်နီ၊ သတ္တမအမြစ်ကား ခရုသုလိတ်၊ အဌမအမြစ်ကား မျက်ရွဲ၊ နဝမအမြစ်ကား ဥဿဖရား၊ ဒသမအမြစ်ကား ခရုသုပြတ်၊ ဧကဒသမ အမြစ်ကား ဝါကိသု၊ ဒွါဒသမအမြစ်ကား ဂေါ်မုတ်ဖြစ်သတည်း။ တံခါးရွက် တဆယ်နှစ်ရွက်အသီးသီး တို့သည် ပုလဲတပြားစီဖြင့်ပြီး၍ ပုလဲတဆယ်နှစ်ပြားဖြစ်ကြ၏။ မြို့လမ်းမသည် ကြည်လင် သောဖန်ကဲ့ သို့သော ရွှေစင်ဖြစ်၏။” (ဗျာဒိတ် ၂၁း၁၈-၂၁)
၁။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာ တကယ့်နေရာရာပါ။ (Indeedaplace)
ယောဟန် ကိုယ်တိုင် မြင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့သလို သခင် ခရစ်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ပြောဆို အတည်ပြု ခဲ့သော စကားလည်းရှိပါသည်။
“ငါ့အဘ၏ အိမ်တော်၌ နေစရာ အခန်းများ ရှိ၏။ သို့မဟုတ်လျှင် မဟုတ်ကြောင်းကို သင်တို့အား ငါမပြောဘဲမနေ။ သင်တို့နေစရာ အရပ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှါ ငါသွားရ၏။” (ယော ၁၄း၂)
ဟု ပြောဆိုခဲ့ ဘူးပါသည်။
၂။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာ သဘာဝကျတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ (Real place)
ထိုနေရာကို တိုင်းထွာ၍ ရနိုင်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများကဲ့သို့ အသုံးအဆောင်များနှင့် ဆောက် လုပ်ထားပြီး အလျား၊ အနံ၊ အမြင့် တို့ရှိသော နေရာ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်ထွာဆောက်လုပ်ထားသော တံခါးများ၊ အုပ်မြစ်အခြေများ၊ နံရံများ ပါဝင်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် အခြေအနေ (သို့) ဖြစ်တည်မှု တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ထိုနေရာသည် နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါ။ ထိုနေရာသည် အပျော်ရှာ သည့် နေရာလည်း မဟုတ်ပါ။ ထိုနေရာသည် တိမ်စိုင်တိမ်ခဲများနှင့် မြူခိုးမြူမှုန် ကလေးများရှိနေ သည့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် နေရာတစ်ခုလည်း မဟုတ်ပါ။ ထိုနေရာသည် သေချာမှုရှိသည့် ကျွန်တော်တို့ သွားနိုင် သည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အလွန်နှစ်သက်ဖွယ် နေရာလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင် ထိုနေရာ၏ အတိုင်းအတာ ဖြစ်တည်မှုများကို အတိအကျ သေချာစွာ ဖော်ပြထားသောကြောင့် မသေချာ မရေ ရာသော နေရာ တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ဘာသာရေး စိတ်ကူးယဉ် နေရာတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း ထပ်မံ ပြောဆိုလို ပါသည်။ ထိုနေရာသည် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် အသိပေး ပြောကြားထားသည့် ကောင်းကင်နေရာ အစစ်အမှန် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ရှောလမုန် ဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်
“ဤအရပ်၌ ဆုတောင်းပဌနာ ပြုကြသောအခါ၊ ကျိန်းဝပ်တော် မူရာ ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်၍ အပြစ်မှ လွှတ်တော်မူပါ။” (၃ရာ ၈း၃၀)
ဟု အော်ဟစ် ဆုတောင်းခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော။
၃။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ကြီးမားသော နေရာကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ (A Large Place)
“ငါ့အဘ၏ အိမ်တော်၌ နေစရာ အခန်းများ ရှိ၏။” (ယော ၁၄း၂)။
“ငါနှင့်စကားပြောသောသူသည်၊ မြို့ကို၎င်း၊ တံခါးတို့ကို၎င်း၊ မြို့ရိုးကို၎င်း တိုင်းခြင်းငှါ တိုင်းစရာ ရွှေကျူလုံး ပါ၏။ မြို့သည် စတုရန်း လေးထောင့်ဖြစ်၏။ ထိုသူသည် ကျူလုံးနှင့်မြို့ကို တိုင်း၍ မြို့၏အနံ၊ အလျား၊ အမြင့်၊ ယူဇနာ တရာနှစ်စီရှိ၏။ မြို့ရိုးထုကို တိုင်း၍၊ လူအတောင်ကဲ့သို့သော ကောင်းကင်တမန် အတောင်အားဖြင့်၊ တရာလေးဆယ်လေးတောင်ရှိ၏။” (ဗျာဒိတ် ၂၁း၁၅-၁၇)
ကောင်း ကင်နိုင် ငံတော် မှာ ဘုရား သခင်က လူတစ်ကာကို ခေါ်ဖိတ် နေရင် ပြည့်ကျပ်နေမလား ဟု ဆိုရိမ်စရာ မလိုပါ။ မြို့တော်၏ ကြမ်းခင်း အခြေ ဧရိယာမှာ စတုရန်မိုင် (၂)သန်းခန့် ရှိပါလိမ့်မည်။ ထိုမြို့တော်ကြီး မှာ လေးထောင့်ဖြစ်သည်။ အလျား၊ အနံ၊ အမြင့်တို့မှာ ၁၄၀၀ စတုရန်းမိုင် အညီအမျှ ရှိသည်။ ပညာရှင်ကြီး တစ်ဦးက မြို့တော်ကြီး၏ အကျယ် အဝန်းမှာ မက္ကစီကို နိုင်ငံနယ်စပ်မှ ကနေဒါနိုင်ငံ နယ်စပ်တိုင်အောင် ကျယ်ဝန်းရှည်လျားသည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုအကျယ်အဝန်းမှာ အင်္ဂလန် နိုင်ငံထက် အဆ (၄၀)ကျော် လန်ဒန်မြို့တော်ထက် အဆပေါင်း (၁၅၀၀၀) ကြီးမားပါသည်။ ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမဏီ နိုင်ငံထက် (၁၀) ဆကျော် နှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံထက်လည်း ပိုမိုကြီး မားသည် ဟု ဆိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျယ်အဝန်းမှာ ၂၆၁၂၂၈ စတုရန်းမိုင် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံထက် (၈) ဆခန့် ကြီးမား သည်ဟု တွေးမြင်နိုင်ပါသည်။
သင်သည် ထိုအရာအတွက် သံသယ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကြီးမြတ်သော ဘုရားဖြစ် သည်ကို သင်မမေ့ပါနှင့်။ စကြဝဠာကြီးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်းဆင်းသော ဘုရား၊ ကြီးမြတ်သော ဘုရားသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို ဖန်ဆင်း၍ လူသားအပေါင်းကို နေထိုင်နိုင် ရန် အခန်းပေါင်း များစွာကို ဖန်းဆင်း ထားသည်ကို သင် သတိယလိုက်ပါ။ ထိုအရာများကို ကြည့်ရှုပြီး ဘုရားသခင်ကို သံသယ မရှိပါနှင့်။
← သမ္မာကျမ်းစာ Software
အဲဂုတ္တုပြည်မှကပ်ဘေးကြီး(၁၀)ခုနှင့် တန်ခိုးကြီးသောထာဝရဘုရား →
2 comments on “ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်း”
Cho on 27/05/2013 at 10:51 PM said:
လောကမှာ အလုပ်ပြီးရင် ထိုနေရာကို ကျနော်သွားတော့မယ်
ahwumee htamai on 07/06/2013 at 2:31 AM said:
AMEN.MAY OUR GOD BLESS YOU.
မိခင်ဟူသည် . . .
ဘာကြောင့် ဘုရားကျောင်း တတ်ရတာလဲ။
ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းသည်ဆိုရာဝယ် . . .
ဝိညာဉ်ရေးရာ ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ ဂီတာလက်သံ
ရှောလမုန်ဘုရင်၏ အသက်တာကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်း
ကျွန်တော် ဒါဝိတ်ဘုရင်ကို ကြိုက်နှစ်သက် ရခြင်း အကြောင်း
ဘုရားသခင်၏ လင်းယုန်ခရစ်ယာန်များ (၁)
Naw glady on ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း
ဦးမင်းလွင် on ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း
Kpsteven Hung on ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း